झगडा हुँदा कसैलाई पनि नभन्नुहोस् यी ४ कुरा, नत्र लिनसक्छ उग्र रुप – Khabaarpati
November 4, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on झगडा हुँदा कसैलाई पनि नभन्नुहोस् यी ४ कुरा, नत्र लिनसक्छ उग्र रुप
काठमाडौँ । कपल्स बीच झगडा हुनु आम कुरा हो तर कहिलेकाहीँ सानो कुरा नै ठुलो बन्छ। कहिलेकाहीँ त कुरा यति धेरै बिग्रिन्छ कि सम्बन्ध नै टुट्ने परिस्थिति सिर्जना आउँछ। खासमा पार्टनर्सलाई केही कुरा पनि लुकाउन हुन्न तर पनि कुनैबेला सम्बन्धलाई बचाइराख्न केही कुरा लुकाएर राख्नु नै राम्रो हुन्छ। आज हामी तपाईलाई बताउँदै छौँ ती सिक्रेट जुन पार्टनरको अगाडी नभन्नु नै सही हुन्छ।
१. तपाईको पार्टनर आफ्नो बिजी शेड्यूलको कारण तपाईलाई चाहे जति समय दिन सक्दैन। जब उनी तपाईको नजिक आउने कोशिश गर्छन् त्यतिबेला उनलाई सेल्फिश नसोच्नुहोला। यस्तो किसिमको शब्दले उनलाई निकै डिस्टर्ब गर्छ। यसकारण समस्याको हाल चाहनुहुन्छ भने रिस उठ्दा पनि यस्तो शब्द प्रयोग नगर्नुहोला।२. विवाहपछि कपल्सबीच विवाद हुनु ठुलो कुरा हैन। यद्यपि झगडा बढी बढ्दा मानिस विवाहलाई नै जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो गल्ती मान्न थाल्छन्। झगडाले उग्र रुप लिँदा पनि पार्टनरलाई यस्तो कुरा कदापि भन्न हुन्न किनकी यस्तो कुराले उनको मन कटक्क खान सक्छ।
३. प्राय: मानिस विवाह पछि पार्टनरलाई भन्दा बढी कामलाई प्राथमिकता दिन्छन्। पार्टनरले हरेक समय तपाईको व्यस्तता सम्झनेछ भनेर कहिल्यै आश नगर्नुहोला। आफ्नो काम सँग-सँगै पार्टनरको नजरिया पनि बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला र उनलाई समय दिने भरपूर कोसिस गर्नुहोला।
४. आपसी लडाई-झगडामा मानिस प्राय: एक-अर्काका माता-पितालाई पनि गाली दिन्छन् अनि गलत शब्द भन्छन्। यसले सम्बन्ध झन् खराब हुन्छ। आफ्नो आपसी झगडामा दुवैले अभिभावकलाई बीचमा नल्याएकै राम्रो हुनेछ।
देखने बितीकै ॐ लेख्नुहोस मनोकामना पुरा हुने छ